चीनको याे विद्यालयले दर्जनौं विद्यार्थी रातभर किन बनायो बन्धक ? रहस्य थाहा पाएर राष्ट्रपति सी खुसीले गदगद — Sanchar Kendra
चीनको याे विद्यालयले दर्जनौं विद्यार्थी रातभर किन बनायो बन्धक ? रहस्य थाहा पाएर राष्ट्रपति सी खुसीले गदगद
काठमाडौँ। चीनमा एक विद्यालयका एक कर्मचारीलाई कोरोना देखिएपछि दर्जनौ विद्यार्थीहरुलाई एउटा प्राथमिक विद्यालयमा घन्टौंसम्म बन्धक बनाएर राखेको खुलासा भएको छ ।
यसै साता भएको सो घटनामा विद्यार्थीलाई बन्धक बनाइएपछि चिन्तित बनेका अभिभावकहरुको एउटा ठूलो समूह मध्यरातसम्म विद्यालय बाहिर जम्मा भएर बसेका थिए । विद्यार्थीहरुको कोभिड परीक्षण गरिएकोले त्यसको नतिजा नआउन्जेल मध्यरातसम्म विद्यालयमै बस्न भनिएको थियो । बिद्यालयमा राखिएका बालबालिका ७ देखि १२ वर्षका भएको अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय समचार सस्था जिमुका अनुसार विद्यालयका हेडमास्टर स्थानीय समयअनुसार रातीको साढे ११ बजे विद्यालय बाहिर निस्केर अभिभावकलाई केही विद्यार्थी क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने जानाकारी गराएका थिए ।
रातभर विद्यालयमा बस्नुपर्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक कपडा ल्याउन उनले अभिभावकलाई अनुरोध गरेका थिए । अर्को दिन कोभिडको नतिजा सार्वजनिक भएपछि मात्र उनीहरुलाई बाहिर आउन अनुमति दिइने उनीहरुले बताएका थिए ।
३५ विद्यार्थीलाई रातभर क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीको परीक्षण गरिएको थियो । अहिले विद्यालयलाई अस्थायी रुपमा बन्द गरिएको छ । यो खबर सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति सीखुसी भएका छन् । कोरोनाबाट जोगिन बेलैमा पहल भएको भन्दै उनले स्कुललाई धन्यवाद समेत दिए ।
यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले युरोपमा गत महिनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण ५० प्रतिशत भन्दा बढी बढेको बताएका छन् । यसले खोपहरूको पर्याप्त आपूर्तिको बाबजुद युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘त्यहाँ प्रशस्त खोप उपलब्ध हुन सक्छ, तर खोपको खपत बराबर हुन सकेको छैन जसले समस्या निम्त्याएको छ,’ डब्ल्यूएचओका आपतकालीन प्रमुख डा माइकल रायनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्।
उनले युरोपेली अधिकारीहरूलाई खोपहरूमा ‘अन्तर बन्द’ गर्न आग्रह गरे। डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससका अनुसार आफ्नो जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खोप लगाएका देशहरूले रोक्नु पर्छ र यसको सट्टा विकासोन्मुख देशहरूलाई उनीहरूसँग रहेको खोप प्रदान गर्नुपर्दछ ।
‘इम्युनो–सम्झौता भएका मानिसहरूलाई बाहेक अरू कुनै बूस्टरहरू मात्रा दिन हातर गर्नु पर्दैन,’ टेड्रोसले भने। उनले खोप निर्माताहरूलाई कोभ्याक्स आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरेका छन् । अझै, गरीब देशहरूले विश्वको कोभिड–१९ खोपहरूको १ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गरे पनि, अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एशियामा केसहरू गत हप्ता ९ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ।
यसअघि बिहीबार, डब्ल्यूएचओका ५३ देशका युरोप क्षेत्रका निर्देशक डा हान्स क्लुगेले कोभिड–१९ का बढ्दो सङ्क्रमितको सङ्ख्या गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए।
‘युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दुमा फर्किएको छ जहाँ हामी एक वर्ष पहिले थियौं,’ डब्ल्यूएचओको कोपेनहेगन कार्यालयका क्लुगेले भने। क्लुगेले चेतावनी दिदै भनेका छन् कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितको अस्पताल भर्ना दर गत हप्तामा दोब्बर भन्दा बढी भएको छ र यस्तै बढ्दै जाने हो भने यस क्षेत्रमा थप ५००,००० महामारीबाट मृत्यु हुनसक्छ ।
डब्ल्यूएचओ युरोपले मध्य एशियामा पूर्व सोभियत गणतन्त्रहरू जत्तिकै पूर्वसम्म फैलिएको क्षेत्रले झण्डै १८ लाख नयाँ साप्ताहिक घटनाहरूमा अघिल्लो हप्ताको तुलनामा करिब ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताएको छ ।
क्लुगेले यस क्षेत्रका देशहरू ूभ्याक्सिनेशन रोलआउटको विभिन्न चरणहरूमाू रहेको र क्षेत्रव्यापी औसत ४७ प्रतिशत मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा खोप लगाइएको बताएका छन्। त्यसैगरी केवल आठ देशहरूमा भने उनीहरूको जनसंख्याको ७० प्रतिशतलाई पूर्ण रूपमा खोप लगाइएको छ।
युरोपको कोभिड १९ मा भएको बृद्धिले लगातार पाँचौं हप्तासम्म बढिरहेको देखाएको छ। संक्रमण दर युरोपमा अहिलेसम्मकै उच्च थियो, जसले प्रति १००,००० व्यक्तिमा १९२ नयाँ सङ्क्रमण भएको देखाएको छ।
‘हामी स्पष्ट रूपमा अर्को लहरमा छौं,’ स्वीडेनका प्रमुख महामारी विशेषज्ञ एन्डर्स टेगनेलले बिहीबार भनेका छन्, ‘महामारीको बढ्दो रूप पूर्ण रूपमा युरोपमा केन्द्रित छ।’ मध्य र पूर्वी युरोपका धेरै देशहरूले हाल दैनिक सङ्क्रमण दर बढेको देखाएका छन्।
एम्स्टर्डममा रहेको युरोपेली मेडिसिन एजेन्सीले बिहीबार अनलाइन ब्रिफिङमा विज्ञहरूले सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेका छ। ‘युरोपमा महामारीको अवस्था अहिले धेरै चिन्ताजनक छ किनकि संक्रमण दर, अस्पतालमा भर्ना हुने र मृत्युको संख्यामा बृद्धि भएको देख्न सक्छौं,’ इएमए का क्लिनिकल अध्ययन र निर्माण कार्य बलका प्रमुख फर्गस स्वीनीले भने।
उनका अनुसार सबैलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाउँन अनिवार्य छ किनकि यो मात्र महामारी नियन्त्रण गर्ने एक सशक्त उपाय हो । एपी